Maxaa ka jira in Wasiir Beyle uu guri wayn ka dhisanayo magaalada Hargeysa? – Xeernews24
Maxaa ka jira in Wasiir Beyle uu guri wayn ka dhisanayo magaalada Hargeysa?
10. April 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Dr Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa la ogaaday inuu guri wayn ka dhisanayo magaalada Hargeysa ee xarunta Maamulka Soomaaliland.
Gurigaan oo ka kooban dhismo wayn oo dabaq ah ayaa dhismihiisa wali waxa uu ka socdaa Xaafadda Jig Jiga yar ee magaalada Hargeysa waxa uuna sidoo kale gurigaan oo dhismihiisa wali socda ka kooban dhowr dabaq sida ay muujinayaan sawirada laga soo qaaday dhismaha guriga.
Dhismahaan gurigaan ayaa ka kooban Shan (5) dabaq oo midkiiba uu ka kooban qolal badan waxaana loo qorsheeyay in laga dhigo Hotel halka warar kale ay sheegayaan in laga dhigi doono Suuq Ganacsi oo wayn iyadoo laga kirayn doono ganacsatada yar-yar.
Dad kusugna magaalada Hargeysa ayaa sheegay in dhismaha gurigaan Wasiir Beyle uu wakiil uga yahay wiil ay Walaalo yihiin kaas oo ka yimid dalka Côte d’Ivoire ama Ivory Coast, islamarkaana Ganacsade ka ah dalkaasi.
Dr C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa hanta badan ku leh magaalada Xeebta ah ee Abidjan ee dalka every Coast, waxana la sheegayaa in halkaasi isaga iyo qoyskiisa ay ku leeyihiin hanta badan iyo ganacsi waa wayn.
Wiilka hada wakiilka ka ah dhismahaan ka socda Hargeysa ee uu leeyahay Wasiir Beyle ayaa la sheegay in uu madax ka ahaa hantida Wasiir Beyle ee dalka Ivory Coast waxa uuna halkaan joogi doonaa waqti kooban sida uu qorshuhu yahay.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Dr Craxmaan Ducaale Beyle wali nooma suurta gelin in aan helno si aan wax uga weydiino gurigaan uu ka dhisanayo Hargeysa.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/04/Hargeysa.jpg 960 720 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-04-10 09:29:352019-04-10 09:29:35Maxaa ka jira in Wasiir Beyle uu guri wayn ka dhisanayo magaalada Hargeysa?
Saddex arrimood oo ku saabsan ganacsade Geelle iyo Jabuuti. Majaajilo Laga Metelay Khilaafka Geelle Arab iyo Geelle Jabuuti.